Isgoyska ayaa Bilaabaya Meel Ficil leh oo ku taal Terminalka Ku -meelgaarka ah ee Ku -meelgaarka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Isgoyska ayaa Bilaabaya Meel Ficil leh oo ku taal Terminalka Ku -meelgaarka ah ee Ku -meelgaarka ah
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Diyaarinta cuntada iyo cabbitaanka bannaanka, madadaalada, iyo qurbaannada madadaalada ayaa nooleyn doonta badhtamaha magaalada San Francisco waxayna gaarsiin doontaa hagaajinta loo baahan yahay ee xaafadda East Cut iyada oo la furi doono Isgoyska Isgoyska Bariga.
Isgoysku waa hawlgal ku -meelgaar ah oo loo soo saaray si loogu jawaabo iyo iyadoo lala kaashanayo Qorshaha Dib -u -soo -kabashada ee Duqa Magaalada London.
Dadaalka sannadaha badan leh ee lagu hawlgelinayo goobta ayaa gaarsiin doona faa'iidooyinka loo baahan yahay ee xaafadda iyada oo sidoo kale gacan ka geysan doonta dib-u-furidda badhtamaha magaalada San Francisco.
Dhulkii ku dhowaad 3.5-acre ayaa loo beddelaa oasis magaalo.
Wada -hawlgalayaasha Goosashada Degista Bariga (ECLP), iskaashi ka dhexeeya Degmada Dheefta Bulshada Degmada East Cut (East Cut CBD), Beerta Nestory, Firfircoon Dhab Ah iyo Wadada Soccer USA, ayaa ku dhawaaqay furitaanka rasmiga ah ee Isgoyska East Cut, oo ah meel ay beeshu u socoto oo ku taal Terminalkii Hore ee Ku -meelgaarka ee Ku -meelgaarka ahaa. Dadaalka sanadaha badan leh ee lagu hawlgelinayo goobta ayaa gaarsiin doona dheefaha loo baahan yahay ee xaafadda iyada oo sidoo kale gacan ka geysan doonta dib-u-furidda badhtamaha magaalada San Francisco iyo taageeridda ganacsiyada yaryar ee la kulmay caqabado aan hore loo arag intii lagu jiray masiibada COVID-19.
Furitaanka Sebtember 10, 2021, Isgoyska ayaa ah hawlgal ku -meelgaar ah oo la soo saaray iyadoo laga jawaabayo isla markaana lala kaashanayo Qorshaha Dib -u -soo -kabashada ee Duqa Magaalada London. Meesha ku dhow 3.5-acre ee u dhexeysa Howard, Main, Folsom, iyo Beale Street ayaa loo beddelaa oasis magaalo oo ay ka muuqdaan beer beer-saaxiibtinimo leh, gawaarida cuntada, garoonnada kubbadda cagta iyo darbiga dhulka ee wajiga hore. Shaneemo dibadda ah, dukaamo cunto iyo tafaariiqle ah, suuqa bulshada, iyo aagagga ciyaarta ayaa lagu dari doonaa dhowaan.
"Sannadkan wuxuu na tusayay sida helitaanka daruuriga ah ee bannaanka loogu baahan yahay wanaagga bulshooyinkayaga iyo horumarka guud ee magaaladeenna," ayuu yiri Duqa Breed. "Goobtan sida quruxda badan loo naqshadeeyay waxay siin doontaa meel aamin ah oo soo jiidasho leh xubnaha bulshada iyo booqdayaasha magaaladeena si ay dibedda ugu soo baxaan oo ay ugu raaxaystaan ​​firfircoonida badhtamaha magaalada."
"Waxaa jiray in sannado badan ay dadka deegaanku ku riixayeen in la kiciyo goobta, marka waxaan dareennay inay waajib nagu tahay inaan sida ugu dhakhsaha badan u furno oo aan ku darno barnaamijyo bilaha soo socda," ayuu yiri Kipp Kjeldgaard oo ka tirsan Real Active. “Marka la eego saamaynta COVID-19 ku leedahay meheradaha, furitaanka si dhakhso leh ayaa sidoo kale muhiim ah si loo caawiyo ganacsatada maxalliga ah gacanna loo siiyo soo celinta shaqaalaha iyo booqdayaasha Magaalada San Francisco. "
“Iyada oo lala kaashanayo ganacsiyada maxalliga ah iyo ururada bulshada si loo bixiyo barnaamijyo kala duwan oo soo jiidasho leh, mashruucan cusub ee xiisaha leh wuxuu hormarin doonaa soo kabsashada badhtamaha San Francisco runtiina wuxuu noqon doonaa meel dadka oo dhan dareemaan soo dhaweyn. Waxaan ku martiqaadeynaa qof walba inuu nagu soo biiro si loogu dabaaldego wax kasta oo San Francisco ka dhiga magaalo heer caalami ah; cunto aad u fiican, muusig, waxqabadyo iyo meel dadka oo dhami isugu yimaadaan goob run ahaantii u gaar ah. ”
Barnaamijyada waxaa hagaya warcelinta bulshada
CBD -da East Cut, oo ah hay'ad aan macaash doon ahayn oo bixisa nadiifinta, badbaadada, iyo dayactirka jardiinooyinka iyo meelaha bannaan ee degmada, ayaa ka shaqaysay in ay hawlgeliso goobta muddo ka badan saddex sano. Iyada oo qayb ka ah habsocodkaas, sahan lagu sameeyay in ka badan 1,200 oo deris ah ayaa lala kaashaday xafiiska Kormeeraha Degmada 6aad Matt Haney, iyada oo la weydiiyay jawaabeyaasha waxa ay doorbidayaan barnaamijyada goobta.
“Jawaab -celinta waxay ahayd mid muhiim u ah hagidda horumarinta wada -shaqaynta goobta iyo booqdayaasha barnaamijka ayaa la kulmi doona jawaabahaas,” ayuu yiri Andrew Robinson, Agaasimaha Fulinta ee East Cut CBD.
“Kani waa xaafad soo koreysa oo kobceysa, laakiin gabi ahaanba waxay u baahan tahay meel bannaan oo badan oo ay bulshadu ku kulmaan, ku ciyaaraan kuna raaxaystaan,” ayuu yiri Kormeere Haney. “Isgoyska waxaa loogu talagalay inuu daboolo baahidaas iyada oo lala kaashanayo dadka deggan. Iyada oo leh dhinacyo iyo astaamo badan oo madadaalo leh, waxaa hubaal ah inay xitaa ku dari doonto firfircooni dheeraad ah mid ka mid ah xaafadaha ugu kobaca badan magaaladeena. ”
Bartamaha goobtu waxay ahaan doontaa beer beer leh oo qoyska u fiican iyo baar ay maamusho Monarch Beverage Catering, kaas oo maamula goobo leben-iyo-hoobiye ah iyo dhacdooyin bannaanka ka soo baxaya in ka badan 10 sano Magaalada. Bixinta waaya -aragnimada deegaanno kala duwan, oo ay ku jiraan aagga qoyska, qolka nasashada, iyo meel bannaan oo loogu talagalay kooxaha iyo ururada, beerta beerta waxay yeelan doontaa miisas madadaalo, fadhiga fadhiga dibadda, iyo darbiga dhulka oo uu naqshadeeyay farshaxanka maxalliga ah Laura Stevenson.
In kasta oo beerta beerta ay ugu dambayn ku wareegi doonto cuntada iyo dukaamada tafaariiqda oo uu dhisay ganacsadaha maxalliga ah iyo milkiilaha Lightbox Café, Hugo Santana, saf kala duwan oo ah gaadiid raashin tayo leh ayaa booskooda qaadan doona ilaa inta la dhammaystirayo samaynta iyo rakibidda.
Deegaanka ku salaysan, Wadada Soccer USA waa la -hawlgale muddo dheer ah oo ka tirsan Magaalada San Francisco iyo ururka ugu horreeya ee qaranka ee adeegsiga kubbadda cagta ee isbeddelka bulshada, iyada oo in ka badan toban sano oo waayo -aragnimo ah ka shaqaynaysay San Francisco iyo guud ahaan Aagga Bay, California, iyo qaranka. Street Soccer USA waxay rakibi doontaa laba maxkamadood oo kubbadda cagta ah si ay u martigeliso cayaaraha horyaalnimada ee tartamada oo dhan marka lagu daro martigelinta dhacdooyin kale oo ku saleysan isboorti. Street Soccer USA waxay kaloo tababari doontaa oo shaqaalaysiin doontaa xubnaha bulshada si ay u tababaraan oo u maareeyaan barnaamijyada Naadiga Soccer Community Club halkaas oo dhallinyarada xaafaddu ay ka heli karaan manhajka xirfadaha nolosha iyaga oo u maraya kubbadda cagta oo lacag la'aan ah.
“Marka la taabto xoogga mideeya ciyaarta, oo isu keena ciyaartooyda iyadoon loo eegayn isirka, diinta ama xaaladda dhaqaale, jardiinooyinka Street Soccer USA waxay noqdaan dhibco lagu faano bulshada. Goobahayaga waxaa lagu horumariyey isla ruuxaas, waana ku faraxsanahay inaan ku casuunno qof walba inuu halkaan ka ciyaaro oo uu ka qeybqaato awoodda kubbadda cagta si uu u midoobo, ”ayuu yiri Agaasimaha Maamulka Street Soccer USA, Rob Cann.
Kooxda Isgoyska ayaa sidoo kale filaysa in shineemada dibadda ay diyaar u tahay inay ku soo dhaweyso dadka xiiseeya filimada bandhigyada daawashada ah wax yar ka dib furitaanka goobta. Dhiirrigeliyaha dhacdada iyo muusikada Noise Pop Industries, oo ka shaqaysa aagga Bay DoTheBay.com oo waxay gacan ka geysatay soo noolaynta Habeenkii Filimka Fort Mason Flix iyo Sundown Cinema Film, wuxuu ku hawlanaa horumarinta iyo ka shaqaynta shineemada dibadda.
Ka sokow aagga jirdhiska bulshada ee u go'ay u furan shakhsiyaadka iyo tababarayaasha labadaba, fasallo koox iyo shaqsiba waxaa bixin doona LuxeFit, oo hadda ka shaqaysa Wakiilka Dooxada Hayes.
Aagga Bulshada ee Isgoyska ayaa ka muuqan doona adeegyo badan oo dadweyne, oo ay ku jiraan qiyaastii 5,000 cagood oo laba jibbaaran oo ah meel gudaha ah oo ay xafidi karaan kooxaha bulshada maxalliga ah iyada oo aan kharash lahayn. Maareynta ayaa sidoo kale horumarinaysa suuq bulsho, oo marka lagu daro iibinta badeecooyin cusub, kuwa maxalliga ah oo laga yaabo in laga helo suuqa beeraleyda, waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa badeecooyin la baakadeeyay iyo bixinta tafaariiqda.
Waad ku mahadsan tahay talooyinka Xafiiska San Francisco ee Maalgashiga Bulshada iyo Kaabayaasha (OCII), Isgoyska ayaa la shaqeynaya En2Action iyo La Cocina, ururada aan macaash doonka ahayn ee ka shaqeeya xallinta dhibaatooyinka sinnaanta ee ganacsiga, si ay fursad ugu helaan inay ku soo bandhigaan badeecadaha ganacsigooda meel dhexe, jawi saaxiibtinimo leh oo lagu xoojiyay dhacdooyinka iyo waxqabadyada joogtada ah.
David Flaherty oo ka tirsan Nestory Park ayaa yiri, “Mashruucani wuxuu guul weyn u yahay bulshada, ganacsiyada yaryar iyo dib u furista Magaalada. Marka la eego degmadu waxay ku soo kordhisay kumanaan unugyo guriyeyn ah oo ku baahsan dhinacyada dhaqaalaha, oo ah xaafad aad u toosan, mashruucan wuxuu daboolaa baahi aad u weyn isagoo bixinaya faa'iidooyin ballaaran oo bulshada ah halka ay ka maqnaayeen. Markii si buuxda loo hirgeliyo, waxaa la filayaa in in ka badan 30 ganacsato maxalli ah iyo ganacsato shaqaaleysiiya in ka badan 60 qof ay ka howlgeli doonaan goobta. ”
Naqshadeynta aadanaha ku saleysan ee shirkadda hibada leh ee ka dambeysa Oracle Park
Naqshadeynta, Kooxda Isgoysyada ayaa la kaashaday Dad badan, shirkad dhisme iyo naqshadeyn caalami ah oo ku takhasustay isku soo dhaweynta dadka iyada oo loo marayo waaya -aragnimo gaar ah oo la habeeyay. Naqshadayaasha aragtida leh ee ka dambeeya San Francisco's Oracle Park iyo garoomada kale, garoonnada, iyo xarumaha shirarka adduunka oo dhan, Populous sidoo kale waxay horumarisaa ku -meel -gaar ah NFL Superbowl, Olombikada, iyo FIFA.
"Waxaan dooneynaa inaan gacan ka geysanno sidii aan u soo jiidan lahayn aaggan soo ifbaxaya ee San Francisco oo leh ruux gaar ah, oo ku martiqaadaya dadka deggan agagaaraha deegaanka iyo shirkadaha si ay u abuuraan beeshooda iyaga oo u maraya waxyaabaha ay wadaagaan iyo isku -dubarid la'aanta ay halkan ka heleen," ayuu yiri Maamulaha Sare ee Populous, Michael Lockwood .
Shaqada caanka ah ee mashruuca waxay yeelan doontaa raadad ka baxsan San Francisco, oo noqota tusaale loogu talagalay firfircoonida ku -meelgaarka ah ee fekerka leh ee fekerka leh marka dib loo dhisayo oo la dhisayo, iyo muujinta sida loogu abuuro xidhmooyin macno leh xaafadaha dalka oo dhan.
“Isgoysku waa mid wax ka beddeli kara abuurista qiimaha dhul dhul ahaan caadiyan ahaan jiray xayndaab inta lagu guda jiro marxaladda xaq u yeelashada,” ayuu yiri Maamulaha Dadweynaha, Riki Nishimura. “Halkii aan u oggolaan lahayn in boosaska ay noqdaan kuwo aan la adeegsan, waxaan dib ugu celinaynaa goobta bulshada, annagoo u abuureyna meel ay dadku ku raaxaystaan ​​inay mar kale wada joogaan. In kasta oo taariikhdu goobtu ahayd marin ay dadku ka soo galaan kana soo baxaan magaalada, haddana waxay noqonaysaa meel dadku u abuuri karaan safarradooda maalinta oo ay la kulmaan qoysaskooda waqtiyo aan la ilaawi karin. ”
In kasta oo ECLP ay si dhakhso leh u bilaabeyso goobta si booqdayaashu ay isla markiiba ugu raaxeystaan ​​barnaamijyada, waxay la shaqeyneysaa Populous si kor loogu qaado barnaamijyada iyo naqshadeynta walxaha Wajiga II oo runtii ka dhigi doona Isgoyska meel cusub oo heer caalami ah. Buundo sare oo ka gudubta qayb ka mid ah goobta oo abuureysa amphitheater gaar ah ayaa la odorosayaa, sidoo kale waa marxalad u shaqayn doonta sidii hoolka magaalada oo casri ah oo lagu soo bandhigo bandhigyo, dhacdooyin dhaqameed iyo kulanno dadweyne. ECLP waxay haysay wakaaladda suuqgeynta ee fadhigeedu yahay Bay Bay PIVOT si ay u fuliso kafaala -qaade iyo istaraatijiyad shuraako si ay gacan uga geysato keenista kuwan iyo waxyaabaha kale ee la xoojiyay nolosha.
Maaddaama hawlgalintani ay tahay dadaal iskaashi oo ay ku lug leeyihiin ururo iyo shaqsiyaad badan, ka -qaybgal dheeraad ah oo ay sameeyaan fannaaniinta, ganacsiyada iyo la -hawlgalayaashu si loo fuliyo loona wanaajiyo goobta waa la soo dhaweynayaa.
Ururada iyo shakhsiyaadka danaynaya fursadaha iskaashi ayaa soo booqan kara www.eastcutcrossing.com ama email [emailka waa la ilaaliyay] Wixii macluumaad dheeraad ah.
Ku Saabsan Wada -hawlgalayaasha Goosashada Degitaanka Bariga
Wada -hawlgalayaasha Bariga Gooyntu (ECLP) waa Faa'iidada Dadweynaha LLC oo loo sameeyay ujeeddo gaar ah oo ah horumarinta iyo hawlgalka Isgoyska East Cut, oo ah meel ay jaaliyadu ku tagto Terminalkii hore ee Kumeelgaarka Ku -meelgaarka ahaa ee San Francisco. Waxay ka kooban tahay afar urur oo kala duwan oo Aagga Bay ah, saddex xaruntooduna tahay San Francisco, ECLP waxay ka soo baxdaa waayo -aragnimada iyo khibradda gaarka ah ee lammaane kasta si loo gaaro hadaf guud: bixinta faa'iidooyinka ballaaran ee bulshada oo dhan si ay ugu raaxaystaan.
Aan macaash doon ahayn CBD -ta Bariga iyo Wadada Soccer USA siiyaan goobta iyo kartida barnaamijyada-gaarka u ah hawlgelinta, halka Firfircoon Dhab Ah iyo Beerta Nestory samatabbixin horumar, firfircoonaan, iyo khibrad hawlgal.